Sawirro: Ma dhaB baa in Baarlamanka hadda jira uu yahay kan ugu dumarka badan Soomaaliya? | Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Ma dhaB baa in Baarlamanka hadda jira uu yahay kan ugu...
Sawirro: Ma dhaB baa in Baarlamanka hadda jira uu yahay kan ugu dumarka badan Soomaaliya?
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa mudada uu xilka hayo Madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud sarakac ku imaaday tirada Haweenka kamidka ah Baarlamaanka Somalia kuwaasi oo iminka tirro ahaan lagu qiyaaso ilaa 35 xubnood.
Dowlada Madaxweyne Xassan ayaa kaalin mug leh dumarka Soomaaliyeed ka siisay BF hadda jira waxaana xusid mudan inay kaalimaha hore kaga jiraan abuurista Mooshinada iyo xalintiisa.
Xildhibaanada dumarka ah ee ku jira Baarlamaanka ayaa la aaminsan yahay inay ugu badan yihiin Baarlamaanka iminka shaqeeya marka loo eego Baarlamaanadii hore.
Haweenkaani kamidka ah Baarlamaanka ayaa badi heysta dhalasho kale, waxa ayna badankooda joogista Somalia ka doorbidaan inay safaro dibadda ah u kala gooshan, inkastoo ay jiraan kuwo aanba dalka ka bixin.
Haddaba Caasimada Online waxay idiin heysaa qaar kamid ah sawirada Xildhibaanadaasi ka dhex muuqda BF:-